The Great White Void of the ... Full Moon, nke Aki Shimazaki dere
Ọnwa zuru oke, nke Aki Shimazaki
Dee banyere ịhụnanya nwere Aki shimazaki nlebara anya pụrụ iche, ụfọdụ ihe na-egbuke egbuke dị adị nke sitere na ihe efu nke obi mgbawa ruo n'oge opupu ihe ubi na-adịghị agwụ agwụ nke ịhụnanya ịhụnanya. Mmiri nke na-asọba n'otu n'otu na nke na-akpọte otu mmetụta ahụ site n'ebe ọ bụla ozugbo a kwụsịrị mmanya ikpeazụ.
N'etiti adịghị ike, n'agbanyeghị ma ọ bụ njupụta, anyị na-aghọta na, n'ezie, ịhụnanya bụ nanị engine na-akpali ụwa. N'ihi na ịkpọasị na-ebibi naanị. Na ọbụna obi ilu mgbu nke ịhụnanya na-akpọte ndị a melancholic ndetu nke anwụghị anwụ a na-eme ka ọ dị mkpa maka nsusu ọnụ na-adịghị agwụ agwụ. Ebe nchekwa na-ahụ maka imeju ihe niile ọnụ na itinye nkọwa na ncheta nke ịhụnanya epic. Na-enweghị ebe nchekwa, ịhụnanya nwere ike ịla n'iyi ma ọ bụ, gịnị kpatara na ọ bụghị, kpọtere amamihe gaa na mmeri ndị a na-atụghị anya ya.
N’obere obodo dị na Japan, di na nwunye bụ́ Tetsuo na Fujiko Niré bi n’udo n’otu ụlọ nke ụdị cicada nile na-abụ abụ n’ubi ya. Ha bụzi nne na nna ochie, ha kwagara ebe ahụ mgbe ya, Fujiko, malitere igosipụta mgbaàmà nke Alzheimer. Otu ụtụtụ, mgbe Fujiko biliri, o juru ya anya, ọ maghị Tetsuo, di ya.
N'ihi enyemaka a na-emezigharị, Fujiko dara jụụ: onye nọọsụ nọ n'ụlọ ahụ gwara ya na Tetsuo bụ enyi ya nwoke, onye chọrọ ịlụ na, dị ka omenala ndị Japan oge ochie si dị, ọ zutere ekele maka nzukọ, a meow. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, Tetsuo agaghị eche ihu naanị ọnọdụ ndị ga-emejọ ya, ma, karịa ihe niile, ọ ga-ekpebi ma ọ chọrọ ịghọ enyi nwoke nke nwunye ya ruo ọtụtụ iri afọ. N'ihi na ihe ịtụnanya ahụ ka malitere.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ akụkọ "Full Moon", nke Aki Shimazaki dere, ebe a:
Tags Aki shimazaki, Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ dị egwu, Akwụkwọ akụkọ ihunanya